Mpiasan'ny ministeran'ny Serasera Nozaraina atody sy tambavy CVO
Mpiasan'ny Minisiteran'ny Serasera sy ny Kolontsaina miisa 1096 no notolorana arotava sy tambavy CVO ary atody akoho ahafahan'izy ireo misoroka ny mety ho fiparitahan'ny Coronavirus omaly.
Teny amin'ny Minisitera teny Nanisana sy teny Anosy no nanatentarehana ny fizarana. Tonga nanolotra izany ny Minisitra Lalatiana Andriatongarivo sy ireo mpiara-miasa akaiky aminy. Nanentana ireo mpiasa rehetra ny minisitra mba ho maodely amin'ny fiaraha-mientana amin'ny ady amin'ity valan'aretina ity. Niara-nisalahy ary nanampy ny Minisitera tamin'ny fampitaovana ny orinasa SMTP.